သတင်း - Juda တံဆိပ် PA
Juda အမှတ်တံဆိပ် PA
အသေးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်ကိုလွှင့်ထူခြင်းကိုအရပ်ဘက်လျှပ်စစ်ဓာတ်မြှင့်တင်ခြင်းဟုလည်းခေါ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်အိမ်သုံးအသေးစားလွှင့်ထူခြင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုအသေးစားလွှင့်ထူခြင်းတို့ကို ၀ ါယာကြိုးအသေးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်လွှင့်ထူခြင်းနှင့်ကွင်းဆက်အသေးလျှပ်စစ်ဓာတ်လွှင့်ထူခြင်း ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။
လျှပ်စစ်သုံးလျှပ်စစ်လွှင့်တံကိုအမျိုးအစားအသစ်အဖြစ်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ မော်တော်ကား၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး၊ လက်ရာတပ်ဆင်မှုနှင့်နည်းပညာမြင့်စက်မှုဇုန်များနှင့်အခြားခေတ်မီစက်မှုထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ၊ တပ်ဆင်ရေးလိုင်းများ၊ တပ်ဆင်ရေးစက်များ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြားအချိန်များတွင်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုကြသည်။
PA အမျိုးအစားမီနီလျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးသည်နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာကို သုံး၍ ထုတ်ကုန်အသစ်ကိုလွှင့်ထူသည်။ ၎င်းသည်အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးပေါ့ပါးသောကြောင့်သယ်ဆောင်ရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ 1. အရေးပေါ်ရပ်တန့် switch ကို option ကို။
IP54 အထိ 3. ကာကွယ်မှုအတန်း
6.Hoist ဘောင် option ကို။
၈။ Low Voltage
၎င်းသည်ဂိုဒေါင်၊ အထိုင်၊ အသုတ်လိုက်၊ ဆွဲထားသည့်ခြင်းတောင်းနှင့်ကျဉ်းသောအလုပ်နေရာတို့တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကိုပြနိုင်သည်။ ၎င်းသည် fixed column type နှင့် wall type slewing crane တို့၏အကောင်းဆုံးလိုက်ဖက်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သောလျှပ်စစ်လွှင့်ထူလှပသောအသွင်အပြင်၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အဆင်ပြေစွာတပ်ဆင်ခြင်း၊ သေးငယ်သောဆူညံသံ၊ လုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအသုံးပြုမှုဖြစ်သောကြောင့်အသေးစားလျှပ်စစ်လွှင့်ထူခြင်းကိုစက်ရုံများ၊ အလုပ်ရုံများ၊ မိသားစုများ၊ ဂိုဒေါင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ အလှဆင်ခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်အခြားနေရာများတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။
Hebei Juren Hoisting Machinery Co. , Ltd (mobile phone: 19833962905,03125450008 wechat: vinjing688 whatsApp: +8619833962905 အဆက်အသွယ်: Wendy, လိပ်စာ: hebei qingyuan donglv စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်) သည် Baoding ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွင်တည်ရှိသည်။ ပစ္စည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်အဓိကအားဖြင့်လက်ဆွဲကြိုးလွှင့်ထူခြင်း၊ လက်တံတုံး၊ PA ဝါယာကြိုးလျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုး၊ CD1 လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးကြိုးလွှင့်ထူခြင်း၊ လျှပ်စစ်သံကြိုးလွှင့်ထူခြင်း၊ စက်သီးရုပ်သိမ်းခြင်း၊ လက်ဟိုက်ဒရောလစ်ပလက်ဖောင်းထရပ်ကား၊ လက်ပေါက်၊ အမေရိကန်၊ သြစတေးလျ၊ ရုရှား၊ ဂျာမနီ၊ ပိုလန်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများသို့ရှည်လျားကျော်ကြားသည်။
လျှပ်စစ် Lever Hoist, Bannon လျှပ်စစ် hoist, Lever Puller ဖြစ်သည်, အသေးစားလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ကြိုး, Jet 1.5 Ton Chain Hoist, Manual Lever Chain Hoist,